Nhau - Kubudirira kwemazino mazino
Mazino anokura kuburikidza neyakaomesesa maitiro umo minyama yakapfava, ine inobatanidza matishu, tsinga uye tsinga dzeropa, zvakasungwa nemhando nhatu dzakasiyana dzeyakaomarara matipi kuita rinoshanda chikamu chemuviri. Semuenzaniso unotsanangudza maitiro aya, vesaenzi vanowanzo shandisa mbeva incisor, iyo inokura ichienderera uye ichivandudzwa muhupenyu hwese hwemhuka.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti mbeva incisor yakagara ichidzidzwa mune yekuvandudza mamiriro, mazhinji akakosha mibvunzo nezve akasiyana masero emazino, masero emadzimai uye mutsauko wawo uye masimba esimba anoramba achipindurwa.
Vachishandisa imwe-sero RNA yekuteedzera nzira uye mageneti ekutsvagisa, vaongorori veKarolinska Institutet, Medical University yeVienna muAustria neHarvard University kuUSA ikozvino vazivisa uye vakaratidza huwandu hwese hwemasero mumazino embeva uye mudiki ari kukura uye mazino evanhu vakuru. .
"Kubva pamasero emadzinde kusvika kumasero akura akanyatsosiyaniswa isu takakwanisa kutsanangudza nzira dzekusiyanisa dzeodontoblasts, izvo zvinoita kuti dentine - nyama yakaoma iri padyo nepurpiti - uye maameloblast, ayo anoita kuti enamel," yakadaro yekupedzisira yekudzidza. munyori Igor Adameyko kuDhipatimendi rePhysology uye Pharmacology, Karolinska Institutet, uye munyori-munyori Kaj Fried kuDhipatimendi reNeuroscience, Karolinska Institutet. "Isu takawanawo matsva maseru uye masero emazino anogona kutora chikamu mukutamba kwezino."
Zvimwe zvezvakawanikwa zvinogona zvakare kutsanangura zvimwe zvakaomarara immune system mumazino, uye zvimwe zvinopa chiedza chitsva pakuumbwa kwezino enamel, iyo yakaoma nyama munyama yedu.
“Tinovimba uye tinotenda kuti basa redu rinogona kuita hwaro hwenzira itsva dzekurapa mazino mangwana. Zvikurukuru, inogona kumhanyisa nzvimbo iri kuwedzera nekukurumidza yekuvhiya mazino, kurapa kwehutachiona kutsiva munyama yakakuvadzwa kana kurasikirwa. ”
Mhedzisiro yacho yakaitwa kuti isvike pachena muchimiro chekutsvagisa chinoshanda chevashandisi-vane hushamwari maatlasi egonzo nemazino evanhu. Vatsvagiri vanodavira kuti vanofanirwa kuratidza sosi inobatsira kwete chete kune mazino biologist asiwo kune vaongorori vanofarira kusimudzira uye yekuvandudza biology mune zvese.
Zvishandiso zvakapihwa naKarolinska Institutet. Ongorora: Zvemukati zvinogona kugadziridzwa zvechimiro uye kureba.